अनुवाद लोककथा आह्वान
रात ढाकिएको थियो, सर्वत्र घना पत्रपत्रले । ऊ जुन बाटो भएर आफ्नो घर फर्किरहेको थियो, त्यो बाटो सुनसान र नीरव थियो । तथापि त्यो नीरवता मानौं मौन हुँदाहुँदै पनि कर्कश ध्वनियुक्त रहेको आभाष हुँदै थियो !
यही बाटो भएरै ऊ चाँडोभन्दा चाँडो घर फर्किन सक्थ्यो । त्यसैले चलनचल्तीको बाटो नसमातेर उसले यो बाटो समातेको थियो । यो बाटोमा टाढा टाढासम्म हिँड्दा पनि उसले कसैलाई देखिरहेको थिएन । फलतः उसलाई अधीरताले घेरिरहेको थियो । ऊ चिन्तित हुँदै थियो ।
ऊ अक्सर रातबिरात यही बाटो भएर घर फर्कन्थ्यो । त्यसैमा उसले सहजता महसुस गर्थ्यो । तर आजजस्तो पहिले कहिले पनि भएको थिएन । उसले सोच्यो, पछाडि नै फर्किउँ ! तर पछाडि फर्कंदा पनि त्यति नै समय लाग्ने थियो जति यो बाटो पूरा गरेर घर फर्कंदा उसलाई समय लाग्न सक्थ्यो । यही सोचेर पनि ऊ अगाडि नै बढिरह्यो ।
मनको बेचैनी र परेशानी जस्तो थियो, परिणाम पनि त्यस्तै नै हुनगयो ! सहसा उसलाई लाग्यो कसैले ऊमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर त्यस्तो नभएर अरू केही नै भयो !
एउटा नकाबधारीले उसलाई चोर्यो र त्यो नीरवतामा उसलाई लिएर उड्यो । ऊ डरले कराएको कराएकै थियो– म तिमीबाट मुक्ति चाहन्छु ।
नकाबधारीले भन्यो– मुक्तिको नाम नलेऊ ।
त्यो आवाज उसलाई चिने–चिनेको अनुभूत भयो । उसले जब त्यो नकाबधारीलाई भन्यो, सायद तिमी मेरा लागि परिचित छौ, त्यसबेला उसले उत्तर पायो– हामी एक–आपसमा परिचित त छौं नै । हाम्रो उमेर पनि एकै छ । तर यतिखेर तिमीमाथि मेरो पल्ला भारी छ । तिमी रोए म हास्न सक्छु ।
नकाबधारीको कुराहरूको यो कस्तो ‘कन्तुर’ हो ! यो उसको समस्या त थियो नै, कि ऊ नकाबधारीको हातबाट कहीँ कतै हराउनेवाला छ । तर अब उसको दोस्रो समस्या यो पनि थपिएको थियो, जब नकाबधारीले भन्यो– तिमी हरायौ भने म खुसीले उत्सव मनाउन सक्नेछु ।
नकाबधारी उसलाई लिएर जहाँ पुग्यो, आश्चर्यजनक कुरा के थियो भने त्यस उराठलाग्दो ठाउँमा प्रकाश नभएर पनि प्रकाश व्याप्त थियो ! तर यो उज्यालोमा उसलाई लिएर आउने नकाबधारी भने थिएन ।
जो यहाँ थियो यहाँको उदात्त प्रकृत्ति थियो । कतैको पनि घृणित असत्य यहाँ आएर सत्यमा कायाकल्प हुनसक्छ ! बिरामीहरू यहाँ निको भएर चंगा हुन आउँथे । घृणा पनि आउँथ्यो भने यहाँबाट प्रेम स्वरूप नै लिएर फर्किन्थ्यो । चोर यदि धर्मात्मा बन्न चाहन्थ्यो भने यहाँ आएपछि केही नभनेरै उसको परिष्कार हुन्थ्यो । बगरेले जसै जीव वधका लागि छुरा हातमा लिन्थे, यहाँबाट चन्दन उडेर त्यहाँसम्म पुग्थ्यो र तिनको आत्मामा अहिंसाको दियो बालेर फर्किन्थ्यो ! बगरेले अब वध कसरी गरोस् । ऊ वन्दनीय सज्जन भइदिन्थ्यो । मानिस चाहे रावणजस्तै किन न होस्, उसलाई यहाँ पूर्णतः रामको काया प्राप्त हुन्थ्यो ।
यो पाताल हुन सक्दैन । स्वर्ग पनि हुन सक्दैन । त्यसो भए यो कुन स्थान हो ? नकाबधारीको हात यस स्थानमा पुगेको मानिसले यहाँ अन्ततः आफ्नो संसार देख्यो ।
अन्तर यति मात्र थियो कि ऊ वर्तमानबाट थियो । जब कि यो उसको आफ्नो संसार जति अतीतमा थियो त्यति नै भविष्यबाट हुनेवाला थियो ।